We Fight We Win. -- " More than Media ": ၀ီရသူ ရဲ့၉ ၆၉ အဖွဲ့ ကို တန်ပြန်လှုပ်ရှားလာတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အင်အားစုများ
၀ီရသူ ရဲ့၉ ၆၉ အဖွဲ့ ကို တန်ပြန်လှုပ်ရှားလာတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အင်အားစုများ
ဖြူဖြူသင်း၊ ဆရာမသန်းမြင့်အောင် ဒါရိုက်တာကြည်ဖြူသျှင်၊ ကျောင်းသားအဖွဲ့အချို့နှင့် စာရေးဆရာများပါဝင်သောအဖွဲ့သည့် ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ပုဒ်မ ၁၄၄ထုတ်ပြန်ထားသော ကြို့ပင်ကောက်မြို့သို့ ရောက်ရှိကာ နေအိမ်ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည့် အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များသို့သွားရောက်ကာတွေ့ဆုံ အားပေးစကားပြောကြားလျက်ရှိပြီး ပြည်ခရိုင်အတွင်းရှိအခြားမြို့နယ်များသို့လည်း ဆက်လက်သွားရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
"အဘရေပြေးပြေးလို. အိမ်နီးချင်းကုလားတွေက ကျနော်.ကိုပြောလို. သူတို.ဆွဲထုတ်လို. နို.မို.ဆိုကျနော်သေပြီ" လို. အသက် ၇၁ နှစ်အရွယ်အငြိမ်းစားရဲဝန်ထမ်းကြီး ဦးကျော်အုန်းက ကျနော.ကိုပြောပါတယ်။ သူကမွတ်စလင်တွေအများစုနေထိုင်တဲ. မီတ္ထီလာရပ်ကွက်တစ်ခုမှာနေတာပါ။ အရေးအခင်းစဖြစ်တော. ရပ်ကွက်ထဲမှာနေတဲ. ဗုဒ္ခဘာသာတွေ ထွက်ပြေးကြပါပြီ၊ သူကတော.မပြေးပါ။ အငြိမ်းစားရဲဝန်ထမ်းမို.နိုင်ငံတော်ကတော. ဒီလောက်ဆိုးဆိုးရွားရွားကြီးဖြစ်လာရင် ဒီအတိုင်းကြည်.မနေပါဘူးဆိုတဲ.အသိနဲ.မပြေးတာပါ။ သူဦးဆောင်ပြီး မွတ်စလင်နဲ. ဗုဒ္ခဘာသာလူငယ်တွေပူးပေါင်းပြီး လုံခြုံရေးကင်းဖွဲ.ပြီးရပ်ကွက်ကိုကာကွယ်ခဲ.ပါတယ်။ သတ်မယ်. ဖြတ်မယ်.လူအုပ်ကြီးက ထောင်နဲ.ချီပြီး ချီတက်လာပြီဆိုတော. ဦးကျော်အုန်းကို မွတ်စလင်လူငယ်တွေက အဘရေပြေးပြေးဆိုပြီးပြောတာတောင် ဂျစ်ကန်ကန်လုပ်နေလို. ဆွဲထုတ်ခဲ.ရပါတယ်။ သူနေထိုင်တဲ. ရပ်ကွက်ကြီး တစ်ခုလုံးခုတော.ပြာအတိဖြစ်သွားပါတယ်။ သူလဲဒုက္ခသည်ဘ၀ကိုရောက်သွားပါပြီ၊ ၄၁ နှစ်တိတိရဲဝန်ထမ်းလုပ်ခဲ.တဲ.အတွေ.အကြုံကြောင်.ရခဲ.တဲ. နိုင်ငံတော်က အပြစ်မဲ.ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ပေးတယ်ဆိုတဲ.အသိလည်း သူ.မှာမရှိတော.ဘူးလို.ဆိုပါတယ်။ မွတ်စလင်တွေနဲ.အတူပြန်နေရမယ်ဆို နေရဲသေးလားလို.မေးတော. ဘာဖြစ်လို.မနေရဲရမှာလဲလို.ကျနော်.ကိုပြောပါတယ်။
ခုတော. ဦးကျော်အုန်းတစ်ယောက် ဗုဒ္ဓဘာသာဒုက္ခသည် ၅၀၀ လောက်နဲ. ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ခုမှာနေနေပါတယ်။
အေးအဲဒီ ၉၆၉ ကို မပြောခြင်လို့
လုပ်ပါ ဖုရားဂုဏ်တော် တရားဂုဏ်တော်
သံဃာဂုဏ်တော် ဟုတ်လား မပြော
လိုပါဘူး ပြောဖို့လဲ မရှိပါဘူး
မြှောက်ထိုး ပင့်ကော်နဲ့ ဟောခုဖြစ်တော့
ဟိုလို မရည်ရွယ်ပါဘူး ဒီလို မရည်ရွယ်
ပါဘူးနဲ့ တတ်လဲ တတ်နိုင်တဲ့ ဘုန်းဘုန်း
သူ့ကို တရားခံလုပ် အပြစ်အားလုံး
ပုံချနေတာ မဟုတ်ကြောင်း ကိုတော့
ရှင်းအောင် ပြောထားပါရစေ။ မွတ်တွေ
မကောင်းဘူး။ ဗမာတွေ မွတ်ကိုလုပ်တော့
လဲ မွတ်တွေ သောက်ကျင့်မကောင်း
လို့ပဲ။ မျှမျှ တတ လေးများလဲ စဉ်းစား
ကြပါဦး။ တရားရုံးသွားမေး ဘယ်အမျိုး
ကောင်းသား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဗမာလူမျိုး
ကမှ မွတ်မကို မုဒိန်းကျင့်တဲ့ အမှု့ မရှိ
ပါဘူးဆိုရင် လာခဲ့ပါ ကြိုက်သလိုသာ
သာသနာကို ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ ပြုံးပြုံးကြီး
တိုင်းပြည် ဆူမှပူမှ ထမင်းစားရမယ့်
ကောင်တွေ တစ်ကယ်ကို ရှိပါတယ်
ဖုရားစူး မယုံမရှိကြပါနဲ့။ အဖွဲ့တိုင်းမှာကို
တာပါ ဒါပေမယ့် သူများဘာသာကို
ဘင်္ဂါလီ ကိစ္စကတော့ သတ်ကြဖြတ်ကြ
တွေကို နှလုံးနောက်ပေမယ့် ရိုဟင်ဂျာ
လို့နာမည် တပ်တာလဲ လက္ခံနိုင်
စရာမရှိဘူး ပြည်နယ်လဲ မပေးနိုင်ဘူး
ရောက်စနဲ့ နေခြင်သပဆို အေးအေးနေ
မစော်ကားနဲ့။ မွတ်တာ မမွတ်တာနဲ့
ဘာမှ မဆုင်ဘူး။ ဘင်္ဂါလီကျူးကျော်က
ရိုဟင်ဂျာပါ ပြည်နယ်ပေးပါ လုပ်လာရင်
တော့ အဲဒီ ဘင်္ဂါလီဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ
ဖြစ်ဖြစ် ခရစ်ယာန် ဖြစ်ဖြစ်